Itheyibhile yamaXabiso oThengiso loMxholo | Martech Zone
Itheyibhile yamaXabiso oThengiso loMxholo
NgeCawa, uJuni 21, 2015 NgoLwesibini, Juni 23, 2015 Douglas Karr
Kwiminyaka nje elishumi eyadlulayo, ukuthengisa umxholo kwakubonakala kulula kakhulu, akunjalo? Inqaku elinomfanekiso lenze izinto ezimangalisayo kwaye linokusetyenziselwa iphepha leposi elithunyelwe ngqo kwiwebhusayithi yenkampani. Ukukhawuleza phambili kwaye kuya kuba yindawo enzima kakhulu. Lo mbono wendawo yokuthengisa umxholo njengetafile yePeriodic, inobuchule. Yaveliswa ngu UChris Lake, UMlawuli woPhuhliso lweMveliso kwi-Econsultancy.
Cofa kwindawo yokuqala kwindawo yethu ukuze ufumane ifayile ye umfanekiso opheleleyo, kufanelekile ukuprinta nokubeka phezu kwedesika yakho. Okanye mhlawumbi ebhodini onokuphosa i-dart kuyo kwaye ujonge ingqalelo yakho ngaloo mini kwisicwangciso esithile, ifomathi, uhlobo, iqonga, imetriki, injongo, ukuqala okanye ukubuyela umva kwaye wenze umxholo okhoyo! Kwiveki ephelileyo, umzekelo, sidlulile ngaphezulu kwamanqaku e-100 kwiMartech ukuhlaziya amakhonkco, iividiyo, umxholo, okanye imifanekiso. Siwacimile amanqaku ali-XNUMX kwitekhnoloji okanye kwiminyhadala edlulileyo engasaniki xabiso kule ndawo.
Uyisebenzisa njani iTheyibhile yamaXesha oThengiso loMxholo
Kuyo, uChris uhamba ngesikhokelo sakhe esine-7 kwimpumelelo yokuthengisa umxholo, eqala ngesicwangciso kunye nokuphela kokujonga kabini kunye nokwenza umsebenzi wakho ube mhle.
Strategy Isitshixo esisisiseko sempumelelo. Ukucwangcisa kunye nokugxila kubalulekile. Udinga isicwangciso esicacileyo, imephu kwiinjongo zakho zeshishini zexesha elide. I-econsultancy nayo iluncedo kakhulu Esona sikhokelo sokuziqhelanisa nesicwangciso somxholo.
format Umxholo uza ngeendlela ezahlukeneyo kunye nobukhulu. Qaphela ukuba ungasebenzisa iifomathi ezininzi kwisiqwengana esinye somxholo.
Uhlobo lomxholo -Ezi zinto zisekwe kwi- Iindidi eziqhelekileyo zomxholo ezisebenza kakuhle kwi-Econsultancy.
iqonga -Ezi ziqonga zokuhambisa umxholo. Unokuba nazo ezinye zezi (umzekelo # 59, iwebhusayithi yakho). Ezinye ziindawo zentlalo (eyakho, inethiwekhi, amaqela esithathu). Zonke ezi zincedo zisasaza igama malunga nomxholo wakho.
Metrics -Ezi zinto zikunceda ukuba ulinganise ukusebenza komxholo wakho. Ngeenjongo zobufutshane, iimethrikhi zidityaniswe zahlanganiswa (umz iindlela zokufumana).
Goals -Umxholo wonke kufuneka uxhase iinjongo zakho zeshishini eziphambili, nokuba kukuvelisa uninzi lwezithuthi, okanye ukuthengisa ngakumbi, okanye ukwandisa ulwazi lwentengiso. Umxholo okhokelwa yiLaser uza kuphawula ezimbalwa kwezi bhokisi.
Ukwabelana ngeeNgxaki - Oku kuphefumlelwe kakhulu Izinto ezingalawulekiyo zeMedia zokwabelana ngomxholo. Cinga ngabaqhubi beemvakalelo abasemva kokwabelana, kwaye uqiniseke ukuba umxholo owenzayo wenza ukuba abantu bazive nto ithile.
lokuhlola Yonke imixholo kufuneka ilungiselelwe ngokufanelekileyo ukukhangela, kwezentlalo kunye nokuxhasa iinjongo zakho zeshishini.
tags: iifomathi zomxholoUkuThengiswa kweMpahlaUluhlu lokujonga lokuthengisaumxholo wokuthengisa iinjongoumxholo wemetrikiamaqonga omxholoUkwabelana ngomxholo okubangelaqhinga lomxholoiintlobo zomxholoItheyibhile yamaxesha ezinto
Juni 22, 2015 ngo-8: 04 AM
Lo mfanekiso awukho sisombululo siphezulu ngokwaneleyo… xa sizama ukuwuprinta, awufundeki. Umbono omkhulu nangona!
Juni 22, 2015 ngo-10: 44 PM
Nalu unxibelelwano ngokuthe ngqo lokukhuphela umfanekiso wesisombululo esiphezulu kwindawo yabo-ndiyathemba ukuba iyanceda! ikhonkco
Juni 22, 2015 ngo-8: 34 AM
UDoug -yiphi ibhlog enkulu kwaye inobuqili, ingqiqo! Yithande le ngcamango !!! Umyeni wam oyinjineli, ocekisa zonke izinto zentengiso, nokuba ucinga ukuba inomdla. Awusoze wasilela ukuhambisa umxholo omkhulu ngendlela enomdla, enobuchule. Enkosi! UKathy
Juni 22, 2015 ngo-10: 43 PM
Enkosi kakhulu, Kathy! Ndiyayixabisa ngokwenene indlela esi sicwangciso esiboniswe ngayo ngokukodwa! U-Econsultancy ulifanele lonke uzuko.
Juni 23, 2015 ngo-4: 27 AM
Hee uDoug-ndifuna nje ukubulela uthando lwetheyibhile yamaxesha athile! Ndihlala ndizithobile ngempendulo kuyo. Akukho pun ijoliswe ..; )
Juni 23, 2015 ngo-12: 39 PM
Chris, andikwazi ukubulela ngokwaneleyo. Andiwucingi umsebenzi ongene koku!
Mar 11, 2016 ngo 4:14 PM
Umfanekiso opholileyo ngokwenene! Oovimba abalungileyo.
Agasti 30, 2016 kwi-8: 19 AM
Le insaaane! Uber geeky, douglas! Ndiyayithanda itafile yamaxesha kwaye andikaze ndikulindele ukufumana into enje! Enkosi! 🙂
Agasti 30, 2016 ngo-5: 16 PM
Ndacinga ukuba intle nayo! Kudos kubaqulunqi.